အရက်သည်သန္ဓေတားဆေးကိုထိခိုက်ပါသလား။ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ရပ်ရွာ ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ သတင်း သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ရပ်ရွာ၊ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> သန္ဓေတားဆေးကိုသောက်နေစဉ်အရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသလား။
အကယ်၍ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်သင်၏မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆေးပြားများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါက၊ အဖြေကရိုးရိုးလေးပါ။ သင်တာဝန်ကျေပွန်စွာသောက်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊
Pharm.D ကိုတည်ထောင်သူ Sally Rafie မှပြောကြားသည်မှာမွေးရာပါတားဆေးနှင့်အရက်တို့အကြားတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိပါ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အရက်ကိုသောက်ပါကကလေးထိန်းချုပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆေးဆိုင် လူနာများအားကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးဝါးပညာရှင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလေ့အကျင့် 10 ပြည်နယ်များအတွက်တရားဝင်သည် ) ။
သို့သော်သင်မည်မျှသောက်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ အရက်သုံးစွဲခြင်းသည်ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ဆေးပြားများ၏စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည်ယိုယွင်းပျက်စီးစေနိုင်ပြီးချို့ယွင်းမှုသည်သင်၏ဆေးလုံးကိုမယူ၊ အိပ်ချိန်မမှန်သည့်အချိန်တွင်သင့်ဆေးလုံးကိုမသောက်ဘဲသို့မဟုတ်သင်၏ဆေးလုံးကိုလုံး ၀ ယူရန်မေ့လျော့ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများ (နှင့်ဤအရာအားလုံးကို) ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အလိုတော် သင်၏ဆေးပြားများ၏ထိရောက်မှုကိုထိခိုက်သည်။ မဖော်ပြရသေးသော၊ ချို့ယွင်းချက်သည်လိင်ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသင့်သောအတားအဆီးကာကွယ်မှုကိုအသုံးမပြုသင့်ခြင်း၊
မွေးရာပါထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရက်သေစာပြနာနောက်တစ်ခု? (သင်၏ဆေးလုံးကိုသောက်ပြီးနောက်) အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဖြင့်သင်သည်အော့အန်ခြင်းစတင်သည်။
ဒေါက်တာရာဖီကဤသည်မှာကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်၊ တသမတ်တည်းယူရမည်ဖြစ်သည် နှင့်ထိရောက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ရန်အတွက်နေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ။ မှန်ကန်စွာအသုံးပြုသောအခါ, သူတို့ကအထိ 99% ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည် ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်၌တည်၏ နှစ်စဉ်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးများသောက်သုံးသောအမျိုးသမီး ၅% မှ ၉% ကြားသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြသည် (များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ဆေးများပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာမသောက်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ တောင်မှပျောက်နေသည် တစ်ခု ထိုးအလားအလာပြproblemနာ - ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ် နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆက်တိုက်ထိုးဆေးများပျောက်ဆုံးခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည်၊ သင်၏ဆေးထိုးခြင်းနှင့်အတူ back-up contraception နှင့်တိကျသော protocol တစ်ခုလိုအပ်သည်။ , ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာများကဖော်ပြသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အရက်ကိုသေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပြaနာတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။ အလယ်အလတ်တန်းစားခြင်း၊ ဝါရှင်တန်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဂျိမ်းစ်ရှိမုန်၊ IntimMedicine အထူးကု ။ အရက်အလွဲသုံးခြင်းနှင့်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု့အဆိုအရ အမြိုးသမီးမြားအဘို့အ moderation တစ်နေ့လျှင်အများဆုံးသောက်စရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် ။
အရက်ကိုရှောင်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်ကောင်းသည့်အရာဖြစ်သော်လည်းလက်တွေ့တွင်မူအရက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ဟုဒေါက်တာဆိုင်မွန်ကပြောသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရက်ကိုမသောက်ချင်ပေမယ့်အသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချဖို့ - ဒီဟာကကျွန်မရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းထဲကိုလာမယ့်မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်မွေးဖွားနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆေးပြားကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုတာပဲ။
အကယ်၍ လူနာတစ် ဦး ကသူမအားစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သောက်သည်ကိုငါနှင့်မျှဝေလျှင်ဆေးလုံးသည်သူမအတွက်အကောင်းမဟုတ်ချေ။ သတင်းကောင်းရှိပါတယ် ရွေးချယ်စရာများ နှင့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ဤရွေးချယ်မှုများထဲမှအချို့ပါဝင်သည် ကွမ်းခြံကုန်း , implants , ယောနိလက်စွပ် တစ် ဦး intrauterine device ကို (IUD) က ရိုက်ချက် (ကြိုက်တယ် Depot စစ်ဆေးခြင်း ) နှင့်ပရိုဂျက်စတီကိုသာမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်သည့်ဆေးအသစ် (ခေါ်ဆေးပြားသေးသေးလေး)၊ t လွိုင်ကော် , ပိုပြီးခွင့်လွှတ်ဆေးထိုးပြတင်းပေါက်ပေးထားပါတယ် ( စလင်းသည် 2019 ခုနှစ်တွင် FDA ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိခဲ့သည် ) ။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သင်၏သောက်စားခြင်းအလေ့အထရှိနေသော်လည်းရိုးရာဆေးလုံးသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နေသေးလျှင်ထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာရာဖီသည်နှိုးစက်များအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည် ကလေးထိန်းချုပ်မှုသတိပေးချက် သင်အချိန်ဇယားကိုကပ်ရန်ကူညီပေးဖို့ apps များ။
oxycodone သည် oxycontin နှင့်တူသည်
planbဆေးပြားဘယ်လောက်ကြာသလဲ
planbဆေးပြားသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ